Madaxtooyada Somaliland Maxaa ku soo Kordhay? |
Qoddobadahab-maamuuska qaabilo madaxda dowladaha, urrurada goboleedyadaiyokuwa caalamiga ahi, waa dhaqan isku xidhan oou baahan in si feejiganoo laga baaraan-degay loo asteeyo, waxaana ka mid ah qodobbada aadka loo xaaleeyo;calanka loo dhigo wufuudda, Salaanta, qaabilaada madaarka iyo xataa qaabka loo wada fadhiisanayo.
Waxa baratakoolku ku turjumaa xidhiidhkadiblomaasiyadeed iyo iskaashiee ka dhexeeya dhinacamartida ahiyo waddanka martida loo yahay.
Haddaba, haddii aan u soo noqdo dullucda qoraalkan, waxaa Isniintii maanta kamaradaha iyo qalabka warbaahinta ka soo baxay muuqaal si weyn uga duwan hannaankii iyo goobtii uu Madaxweynaha Somaliland ku qaabili jiray madaxda iyo wufuudda ka socota caalamka, waxasawiradu soo saareenmadaxtooyada Somaliland oodabaqday mid ka mid ah nidaamka caalamiga ah ee madaxda loola fadhiisto.
Madaxtooyadu waxaygabi ahaanba beddeshay habkii qadiimiga ahaa ee xafiiska madaxweynaha lagula kulmi jiray wufuudda heerarka kala duwan leh, oo madaxweyneyaashii Somaliland soo maray ay la fadhiisan jireenxafiisyadoodaoo ka duwan kuwa loogu talogalay in lagula xaajoodo madaxda martida ah.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi oomaanta qaabilayergayga cusub ee qarammada midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya, Mr.Nicholas Haysom oo socdaalkiisiiugu horeeyey tan iyo markii uu dhowaan la wareegay xilka kuku yimid Somaliland, ayaa noqdayweftigii u horreeyey ee nasiibkiisa ku soo beegmay isbeddelkan madaxtooyadu ku talaabsatay.
Madaxweyne Biixi iyo danjire Nicholas Haysom waxay fadhiisteen laba kursi oo is dhinac yaalla oo uu u dhexeeyeymiis yar , waxaana madaxweynahadhabartiisa sudhnaa calanka Somaliland, halka ergeygana uu daboyaalay calanka qarammada midoobay!
Sidoo kale, waxa soo jiidasho lahaa madaxdii kale ee ka kala socotay labada dhinacoo si siman u fadhiistay laba goobood oo iska soo horjeeda oo ku dhow halkii ay fadhiyeen madaxweynaha iyo danjiruhu.
Saxaafadda bulshada iyo goobaha barkulanka bulshadu ku haasowdo,ayaa markiiba la isku wareejiyey, lagana doodayisbeddelkaas yar, laakiin aan hore uga jirin Somaliland.
Waxa falaqeeyeyaashu ay ku taliyeen in minbirka lagu qabto shirarka jaraa’id ee madaxtooyada laga dhigo laba mikarafoon, halka ay Wasiir Sacad iyo Danjire Haysom ay iska daba sugayeenhal mikarafoon iyo hal minbir.
Dadka ray’igooda ka dhiibtay mowduucaniwaxay u arkayeen talaabo hore loo qaaday oo ka turjumaysa in xukuumadda sannad jirsanaysa ee Muuse Biixi, ayku hirgalinayso habmaamuuska martidaisla markaana hindisahani qayb ka noqon karohimiladda madaxweynaha ee ku wajahan taabogalinta hannaanka maamul wanaagga.